Leaving to Chaung Tha! | The World of Pinkgold
strike on April 9, 2009 at 7:49 am said:
MrDBA on April 9, 2009 at 11:08 am said:
မနက်တတည်က လာနေတာ ဝင်မရဘူး။ ခုမှဘဲရတော့တယ်။ ပိုပျော်ခဲ့ပါ ပိုပျော်ခဲ့ပါ။ ကမ်းသာယာကိုသွားတာမဟုတ်ဘူး. တစ်ချက်ခုတ်နှစ်ချက်ပြတ်။။ ဓါတ်ပုံတွေရိုက်ခဲ့နော့ ..။ ပြီးတော့လဲပြ။
MrDBA on April 10, 2009 at 1:04 am said:
ရုံးပိတ်ရက်တွေ အများကြီးနော် ကောင်းထှာ။ ဒီမှာတော့ မရ။
ုkom on April 11, 2009 at 5:23 pm said:
mmthinker on April 12, 2009 at 8:56 am said:
ငါးခြောက်လှမ်းထားသလိုများ တွေ့ရမလား မသိဘူး။
strike on April 12, 2009 at 10:15 pm said:
ဟား ဟား ဟား…ရေတော့လောင်းသွားပြီ့ဗျား……..ဗွမ်းးးးးးးးးး